Septoajinta - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Septoaginta)
Ny Septoaginta na Septanta na Septoajinta izay hafohezina amin' ny tarehimarika romana hoe LXX (midika hoe "fitopolo"), dia dikan-tenin' ny Baiboly jiosy amin' ny fiteny grika koine. Niitatra ny zavatra tondroin' ny teny hoe Septoaginta ka nahafaoka ny dikan-tenin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) manontolo fa tsy ny Torah ihany. Ny Jodaisma anefa tsy nandray ny Septoaginta fa nitoky tamin' ny Baiboly amin' ny teny hebreo ihany, sy amin' ny dikan-teny grika na arameana (Targoma) manakaiky kokoa ilay amin' ny teny hebreo.
Araka ny lovantsofina taterin' ny Taratasin’i Aristea tamin' ny taonjato faha-2 tal. J.K., ny fandikan-teny ny Torah ho amin' ny teny grika, hono, dia notanterahin' ny mpandika teny miisa 72 tao Aleksandria, tokony ho tamin' ny taona 270 tal. J.K., nampanaovin' ilay mpanjaka lagida atao hoe Ptolemaiosy II.
Marihina fa tsy mitovy tanteraka amin' ny antsipirian' ny votoatin' ny Baiboly hebreo ny an' ny Baiboly amin' ny teny grika. Ohatra amin' izany ny fanoloana ny teny hebreo hoe יהוה‬ / Ihwh (ilay nogasina hoe Jehovah na Iahveh) ho Kύριος / Kúrios fotsiny amin' ny teny grika (izay midika hoe "Tompo"). Misy boky hita ao amin' ny Baboly hebreo izay tsy hita ao amin' ny Baiboly amin' ny teny grika sady tsy hita koa amin' ny Baiboly kristiana sasasany koa.
1 Ny anarany sy ny nipoirany
1.1 Ny anarany
1.2 Ny nipoiran' ny Septoajinta
2 Ireo boky ao amin’ny Septoajinta
3 Boky apokrifan'ny Baiboly hebreo
3.1 Boky sy soratra deoterôkanônika katolika sy ôrtôdôksa
3.2 Boky apôkrifa ao amin'ny Baiboly katolika sy ortodoksa
4 Fifandraisan' ny Septoajinta sy ny Baiboly hafa
4.1 Ny Septoajinta sy ireo lahatsoratra tao Komràno
4.2 Ny Septojinta sy ny Baiboly masoretika
4.3 Ny Septoajinta sy ny Volgata
Ny anarany sy ny nipoiranyHanova
Ny teny hoe Septoaginta na Septoajinta dia fanagasiana ny teny latina hoe Septuaginta. Ny teny hoe Septanta kosa dia fanagasiana ny teny frantsay hoe Septante izay avy amin' io teny latina io. Midika hoe "fitopolo" ireo teny ireo. Fanafohezana ny andian-teny hoe Versio septuaginta interpretum ("Dikan-tenin'ny mpandika teny fitopolo") io teny latina septuaginta io, izay avy amin' ny teny grika hoe Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα / Hê metafrasis tôn Hebdomêkonta (izay midika hoe "Dikan-tenin'ny Fitopolo").
Ny nipoiran' ny SeptoajintaHanova
Fotoana fohy taorian' ny nanorenan’ i Aleksandra Lehibe an' i Aleksandria tamin' ny taona 331 tal. J.K., ny zanaka am-pielezana jiosy dia nihamaro tao, indrindra nanodidina ny Lapan’ ny mpanjaka; ka ny roa ampahatelon’ ireo vakin-tanàna ao an-drenivohitra dia natokana ho an’ ireo "taranak' i Abrahama". Nanohy niteny hebreo tao ny Jiosy sady nandinika ireo lahatsoratry ny Testamenta Taloha. Natao ampahibemaso ny fanompoam-pivavahana tao amin’ ny sinagoga ary liana tamin’ ny fahendren’ireto vahiny (grika: βάρϐαρος / bárbaros) ireto ny Grika. Ny sasany tamin’ ny Grika dia nanjary nantsoina hoe "Matahotra an' Andriamanitra" (grika: φοβούμενος τον Θεόν, phoboumenos ton Theon) na "Mpidera an' Andriamanitra" (grika: θεοσέβής / Theosebes) (izay voaresaka ao amin’ ny Asan'ny Apostoly) noho izy ireo nanaraka ny fitsipi-piainana amin’ ny jodaisma, fara-fahakeliny ny Lalàna fiton'i Noa, nefa tsy nanao fiovam-pinoana miteraka famorana izy ireo.
Araka ny Taratasin’ i Aristea (taonjato faha-2 tal. J.K.), ny Septoaginta, hono, dia tanteraka noho ny tsirin-kevitr’ ilay mpanorina ny Trano fitehirizam-bokin’ i Aleksandria, dia i Demetriosy avy any Falero (grika: Δημήτριος ὀ Φαληρεύς / Demetrios o Phalêreus), mpitondra ny tanànan’ i Atena taloha. Tokony tamin' ny taona 270 tal. J.K., izy dia lazaina fa nanolo-kevitra an’ i Ptolemaiosy II Filadelfosy (grika: Πτολεμαίος Φιλάδελφος / Ptolemaios Philadelphos) mba hampanao ny fandikan-teny grika ny boky jiosy rehetra, na bokim-pivavahana na boky fitantarana tsy momba ny finoana izy. Ilay andriana nandala ny kolontsaina grika nahita fianarana tamin’ ny fotoan’ androny, dia liana te hahafantatra ny fitsipik' ireo vahoaka feheziny mba hahafahany manao fandaminana indray eo amin' ny fanjakàny.
Ireo manam-pahaizana jiosy 72 (enina isaky ny fokon’i Israely) hono no nanankinana ilay asa fandikan-teny. Ny lovantsofina dia milaza fa ilay andriana mpisoron’ i Jerosalema, i Eleazara, dia tsy nanaiky ny fangatahan’ ny mpanjaka raha tsy nafahana ireo Jiosy any Jodea izay nogadrain’ i Ptolemaiosy I sy nataony andevo tany Ejipta. Ny lovantsofina tato aoriana dia nilaza fa samy nanao fandikan-teny manokana ny Torah manontolo ireo 72 lahy ireo, ary tamin’ ny fahavitan’ ny asan’ izy ireo vao nampitahaina ny dikan-teny ka nahagaga fa nitovy tanteraka ireo dikan-teny niisa 72. Ao amin’ ny fitantarany, izay tsy vavolombelona ara-tantara azo antoka, dia nanaboribory ny isan’ireo mpandika teny ho 70 i Flavio Josefa ka izay no nahafantarana ny anaran’ ilay dikan-teny hatramin’ ny taranaka aty aoriana.
Maro ireo sora-tanam-piraketan’ ny Septoaginta izay ananana amin’ izao fotoana izao. Misy fahasamihafana anefa izy ireo. Telo ny codex (boky fitambaran-takelaka) feno voatahiry, dia ny Codex Vaticanus sy ny Codex Sinaiticus ary ny Codex Alexandrinus.
Ireo boky ao amin’ny SeptoajintaHanova
Tamin'ny voalohany, ny Septoaginta dia nisy horonan-tsoratry ny Lalàn'i Mosesy (ny Torah na ny Pentateoka ahitana ny boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly) izay vita dika avy amin’ny teny hebreo tamin’ny fiandohan’ny taonjato faha-3 tal. J.K. Avy eo nandritra ny taonjato telo manaraka hatramin'ny fiandohan'ny taonjato voalohany, dia nisy asa-soratra jiosy hafa, nosoratana mivantana amin'ny teny grika na notahirizina tamin'ny dikan-teny grika, izay nanampy ireo. Noho izany ny boky ao amin'ny Septoaginta dia mihoatra izay hita ao amin'ny lisitry ny boky kanonikan'ny jodaisma sy ny protestantisma nanaraka ny Baiboly hebreo avy amin'ny lahatsoratra masoretika nangonina sy naparitaky ny vondrona Jiosy atao hoe Masoreta, teo anelanelan'ny taonjato faha-7 sy faha-10. Nefa ireo boky fanampiny ireo (izay ahitana ireo ataon'ny Katolika hoe deoterôkanônika na ny Protestanta hoe apokrifa, sy ny boky sasany ataon'ny Katolika hoe apokrifa na ny Protestanta hoe pseodepigrafa), dia tsy latsa-danja raha ny momba ny tantaran'ny jodaisma sady ilaina koa mba hahafantarana ny fisainan'ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy avy any Nazareta.
Misokajy efatra ny boky ao amin'ny Septoaginta dia ny Lalàna (na Pentateoka) sy ny Tantara sy ny Fahendrena ary ny Mpaminany. Ny isa sy ny filaharan'ny boky ao amin'ny atao hoe "Mpaminany" ao amin'ny Septoaginta dia tsy mitovy tanteraka amin'ny "Mpaminany" (נְבִיאִים‎ Nevî'îm) an'ny Baiboly hebreo. Torak'izany koa ny ao amin’ny atao hoe "Fahendrena" raha ampitahaina amin'ny boky ao amin'ny atao hoe "Soratra" (כְּתוּבִים/ Ketuvim). Marihina koa fa ireo Bokin'i Samoela sy ireo Bokin'ny Mpanjaka dia atao hoe Βασιλειῶν Αʹ ("Fanjakana voalohany") sy Βασιλειῶν Βʹ ("Fanjakana faharoa") sy Βασιλειῶν Γʹ ("Fanjakana fahatelo") ary Βασιλειῶν Δʹ ("Fanjakana fahefatra") izany hoe "Boky voalohan'ny Fanjakana" sns. Ny Baiboly hebreo anefa manasokajy telo ny boky ao aminy dia ny Lalàna (תּוֹרָה/ Torah) sy ny Mpaminany (נְבִיאִים‎ / Nevî'îm) ary ny Soratra (כְּתוּבִים/ Ketuvim). Ao amin'ny lisitra manaraka dia tsy nasiana ny anaran'ny boky amin'ny teny hebreo ireo boky apokrifan'ny Baiboly hebreo.
Γένεσις / Génesis (malagasy: Genesisy na Jenezy) (hebreo: בְּרֵאשִׁית/ Bereshit)
Ἔξοδος / Eksodos (malagasy: Eksodosy na Eksaody) (hebreo: שִׁמוֹת/ Shemot)
Λευϊτικόν / Leuitikón (malagasy: Levitikosy na Levitika) (hebreo: וַיִּקְרָא / Vayikra)
Ἀριθμοί / Arithmoí (malagasy: Nomery na Fanisana) (hebreo: בְּמִדְבַּר / Bemidbar)
Δευτερονόμιον / Deuteronómion (malagasy: Deoteronomia na Deoterônômy) (hebreo: דְּבָרִים /Devarim)
Ἰησοῦς Nαυῆ / Iêsoûs Nauê (malagasy: Josoa na Josoe) (hebreo: יְהוֹשֻעַ / Yehôshúa‘)
Κριταί / Kritaí (malagasy: Mpitsara) (hebreo: שֹׁפְטִים / Shoftim)
Ῥούθ / Roúth (malagasy: Rota) (hebreo: רוּת/ Rūth)
Βασιλειῶν Αʹ / 1 Basileiôn (malagasy: 1Samoela) (hebreo: שְׁמוּאֵל / Shemû’ēl)
Βασιλειῶν Βʹ / 2 Basileiôn (malagasy: 2Samoela) (hebreo: שְׁמוּאֵל / Shemû’ēl)
Βασιλειῶν Γʹ / 3 Basileiôn (malagasy: 1Mpanjaka) (hebreo: מְלָכִים / Melakhim)
Βασιλειῶν Δʹ / 4 Basileiôn (malagasy: 2Mpanjaka) (hebreo: מְלָכִים / Melakhim)
Παραλειπομένων Αʹ / 1 Paraleipoménôn (malagasy: 1 Tantara) (hebreo: דִּבְרֵי הַיָּמִים / Divrei ha-Yamim)
Παραλειπομένων Βʹ / 2 Paraleipoménôn (malagasy: 2 Tantara) (hebreo: דִּבְרֵי הַיָּמִים / Divrei ha-Yamim)
Ἔσδρας Αʹ / 1 Ésdras (malagasy: 3 Esdrasa na 1 Esdrasa)
Ἔσδρας Βʹ / 2 Ésdras (malagasy: Ezra-Nehemia na Esdrasa-Nehemia) (hebreo: עזרא ונחמיה / Ezra wu-Nekhem'ya)
Τωβίτ / Tôbít (malagasy: Tobita na Tobià)
Ἰουδίθ / Ioudíth (malagasy: Jodita)
Ἐσθήρ / Esthêr (malagasy: Estera) (hebreo: אֶסְתֵר/ Estēr)
Μακκαβαίων Αʹ / 1 Makkabaíôn (malagasy: 1 Makabeo)
Μακκαβαίων Βʹ / 2 Makkabaíôn (malagasy: 2 Makabeo)
Μακκαβαίων Γʹ / 3 Makkabaíôn (malagasy: 3 Makabeo)
Ψαλμοί / Psalmoí (malagasy: Salamo) (hebreo: תְהִלִּים / Tehillim)
Ψαλμός ΡΝΑʹ / Psalmós 151 (malagasy: Salamo faha-151)
Προσευχὴ Μανασσῆ / Proseukhê Manassê (malagasy: Vavak’i Manase)
Ἰώβ / Iôb (malagasy: Joba) (hebreo: אִיּוֹב:/ Iyyôv)
Παροιμίαι / Paroimíai (malagasy: Ohabolana) (hebreo: מִשְׁלֵי/ Mishlei)
Ἐκκλησιαστής / Ekklêsiastês (malagasy: Mpitoriteny) (hebreo: קֹהֶלֶת/ Kōheleth)
Ἆσμα Ἀσμάτων / Asma Asmátôn (malagasy: Tononkira dia Tononkira na Tononiran'i Solomona) (hebreo: שִׁיר הַשִׁירִים / Shīr Ha-Shīrīm)
Σοφία Σαλoμῶντος / Sofía Salomônios (malagasy: Fahendren'i Salomona)
Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ/ Sofía Iêsoû Seirákh (malagasy: Fahendren'i Siràka na Ekleziastika)
Ψαλμοί Σαλoμῶντος / Psalmoí Salomôntos (malagasy: Salamon'i Salomona)
Δώδεκα/ Dôdeka ("Roa ambin’ny folo") (תרי עשר‎ /Trei Asar):
Ὡσηέ Αʹ / I Hôsêé (malagasy: Hosea na Osea) (hebreo: הוֹשֵׁעַ / Hôshēa‘)
Ἀμώς Βʹ / II Âmôs (malagasy: Amosa na Amosy) (hebreo: עָמוֹס / ‘Āmôs)
Μιχαίας Γʹ / III Mikhaías (malagasy: Mika na Mikea) (hebreo: מִיכָה / Mîkhāh)
Ἰωήλ Δʹ / IV Iôêl (malagasy: Joela na Joely) (hebreo: יוֹאֵל / Yô’ēl)
Ὀβδιού Εʹ / V Obdioú (malagasy: Obadia na Abdiasa) (hebreo: עֹבַדְיָה / ‘Ōvadhyāh)
Ἰωνᾶς Ϛ / VI Iônâs (malagasy: Jona na Jônasa) (hebreo: יוֹנָה / Yônāh)
Ναούμ Ζʹ / VII Naoúm (malagasy: Nahoma) (hebreo: נַחוּם / Nakhûm)
Ἀμβακούμ Ηʹ / VIII Ambakoúm (malagasy: Habakoka) (hebreo: חֲבַקּוּק / Khăvhakûk)
Σοφονίας Θʹ / IX Sofonías (malagasy: Zefania na Sôfônia) (hebreo: צְפַנְיָה / Tsĕphanyāh)
Ἀγγαῖος Ιʹ / X Angaîos (malagasy: Hagay na Akjea) (hebreo: חַגַּי / Khaggai)
Ζαχαρίας ΙΑʹ / XI Zakharías (malagasy: Zakaria) (hebreo: זְכַרְיָה / Zekharyāh)
Μαλαχίας ΙΒʹ / XII Malakhías (malagasy: Malakia na Malaký) (hebreo: מַלְאָכִי / Mal’ākhî)
Fanamarihana: Tondroina amin'ny litera grika (Αʹ hatramin'ny ΙΒʹ) ny filaharan'ireo "Mpaminany madinika 12" ary ny tarehimarika romana (I hatramin'ny XII) no asolo ireo litera ireo amin'ny famadihana ny fanoratana amin'ny abidy latina.
Ἠσαΐας / Êsaías (malagasy: Isaia na Izaia) (hebreo: יְשַׁעְיָהוּ / Yesha‘ayāhû)
Ἱερεμίας / Hieremías (malagasy: Jeremia) (hebreo: יִרְמְיָהוּ / Yirmyāhû)
Βαρούχ / Baroúkh (malagasy: Baroka)
Θρῆνοι / Thrênoi (malagasy: Fitomaniana) (hebreo: אֵיכָה/ Eikhah)
Ἐπιστολὴ Ἰερεμίου / Epistolê Ieremíou (malagasy: Epistilin'i Jeremia)
Ἰεζεκιήλ / Iezekiêl (malagasy: Ezekiela) (hebreo: יְחֶזְקֵאל / Yĕkhezqiēl)
Δανιήλ / Daniêl (malagasy: Daniela na Daniely) (hebreo: דָּנִיֵּאל / Dānî'ēl)
Μακκαβαίων Δ' / 4Makkabaiôn (malagasy: 4Makabeo)
Boky apokrifan'ny Baiboly hebreoHanova
Ireto avy ireo soratra apokrifan'ny Baiboly hebreo ao amin'ny Septoaginta izay azo sokajina ho roa araka ny fandraisan'ny Katolika sy ny Ortodoksa azy, dia ireo boky sy soratra deoterokanonika sy ireo boky sy soratra apokrifa.
Boky sy soratra deoterôkanônika katolika sy ôrtôdôksaHanova
ny Bokin’i Jodita (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Bokin’i Tôbià (nadikan'i Md. Hieronimo (na Zerôma) ao amin’ny Baiboly latina (Volgata) sady voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Boky voalohany sy faharoan’ny Makabeo (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Bokin’ny Fahendren’i Salômôna (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Bokin’ny Fahendren’i Siràka (Sirasida na Ekleziastika) (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Bokin’i Baroka (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Taratasin'i Jeremia (na Epistilin'i Jeremia) (toko faha-6n’ny Bokin'i Baroka) (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny Tantaran'i Sozana (toko faha-13n’ny Bokin’i Daniela) (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa) (Jereo: Fanampin'ny Bokin'i Daniela);
i Bela sy ilay Dragona (toko faha-14n’ny Bokin'i Daniela) (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa) (Jereo: Fanampin'ny Bokin'i Daniela);
ny Boky fahatelon'i Esdrasa (tsy voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa);
ny fanampin'ny Bokin'i Estera (voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa)
Boky apôkrifa ao amin'ny Baiboly katolika sy ortodoksaHanova
ny Boky fahatelo sy fahefatry ny Makabeo (ny faha-3 tsy voatahirin’ny Fiangonana katolika sy ireo Fiangonana ortodoksa; ny faha-4 voatahirin’ny Fiangonana ortodoksa nefa apetrany ho tovana ao amin’ny Baiboliny);
ny Salamon'i Salomona (tsy voatahirin’ny Fiangonana katolika nefa voatahirin’ireo Fiangonana ortodoksa).
Ireo boky ireo dia hita ao amin’ny Testamenta Talohan’ny Baiboly ortodoksa sy ny Baiboly latina (Volgata), ary tamin’ny Konsilin'i Trento (1545 - 1563) ny Fiangonana katolika dia nanamafy ny maha isan’ny kanonan’ny Soratra Masina azy ireo. Tsy ny boky rehetra ao amin'ny Septoaginta anefa no voatahiry ho deoterokanonika ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa.
Fifandraisan' ny Septoajinta sy ny Baiboly hafaHanova
Ny Septoajinta sy ireo lahatsoratra tao KomrànoHanova
Ny fahitana ny soratanam-piraketana tao Komràno tamin'ny taona 1947, izay hita fa sisa tamin'ny fitahirizam-bokin'ny sekta jiosy iray izay heverina fa ny Eseniana, dia manaporofo fa ny Septoajinta dia noraisin'izy ireo ho Baiboly, ankoatry ny lahatsoratra amin'ny teny hebreo. Nahatonga ny fiovan'ny fiheverana momba ny tantaran'ny lahatsoratra hebreo izany fahitana izany satria ny sora-tananam-piraketana hebreo tao Komràno ireo dia manome lahatsoratra misy fiavahany kely amin'ny lahatsoratry ny manampahaizana jiosy atao hoe Masoreta.
Ny lahatsoratra tao Komràno anefa dia maneho endrika izay manazava ny fandikan-tenin'ny Septoajinta: misy andalana sasany izay heverina hatramin'izao ho fahadisoana na fanitarana nataon'ny mpandika teny izay lasa mahazo fanamarinana avy amin'ny lahatsoratra hebreo talohan'ny lahatsoratra masoretika. Saika ny lahatsoratra manontolo tao Komràno (90-95%) dia voasoratra amin'ny teny hebreo. Araka ny filazan'i Emmanuel Tov dia 47%n'ny lahatsoratra tao Komràno any ho any no heverina fa voasoratra talohan'ny lahatsoratra masoretika, ny 2,5% talohan'ny lahatsoratra samaritana ary 3,5% ihany no mitovy endrika amin'ny Septoajinta. Soratra vaovao tanteraka ny sisa rehetra.
Maro ireo fitoviam-pivoasana tsapa eo amin'ny soratry ny Eseniana sy ny Septoajinta. Tsy tahirin-kevitra manirery ankehitriny ny Septoajinta, satria maro ireo soratea teo anelanelan'ny fotoana nanoratana ny Testamenta roa izay manintona ny sain'ny mpikaroka. Isan'ireo lahatsoratra jiosy nosoratana talohan'ny vanimpotoana kristiana ny Septoajinta. Ny fiteny grika ampiasaina ao amin'ny Septoajinta dia ahitana fandrafetam-pehezanteny sy fombam-pitenenana semitika.
Taty amin'ny taonjato faha-2, taorian'ny fandripahan'ny emperora romana Hadriano ny Jiosy mpikomy tao Egipta sy tao Kirenaîka no lasa Baibolin'ny Kristiana manokana ny Septoajinta. Talohan'izany dia namaly ny filan'ny Jiosy am-pielezana tao amin'ny faritra manodidina an'i Mediteranea io dikan-teny io, dia ireo vahoaka jiosy nanadray ny fiteny sy ny kolontsaina grika sady avara-pianarana tao Aleksandria.
Ny Septojinta sy ny Baiboly masoretikaHanova
Ny Septoajinta sy ny VolgataHanova
Ny loharanon'ny fahasamihafana maro eo amin'ny Septoajinta sy ny Volgata latina ary ny lahatsoratra masoretika dia niadian'ny mpikaroka hevitra hatry ny ela. Ny homanista tamin'ny vanimpotoana Renaissance dia nihevitra fa ny mpandika tenin'ny Septoajinta dia nanimba ny fandikan-teny avy amin'ny fiteny hebreo ary ny Septoajinta dia nanjary nihasimba arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana.
Manaiky ny ankamaroan'ny mpikaroka ankehitriny fa ny Septoajinta dia nitahiry karazan-dahatsoratra hebreo izay samy hafa amin'ny loharano nahazoana ny lahatsoratra masoretika sy ny nahazoana ny lahatsoratry ny Volgata, ka ahatsapana fa ireo lahatsoratra roa taty aoriana ireo dia ahitana kokoa ny fifanahafan'ny loharano nanovozana ny dikan-teny. Izany fomba fijery izany dia tohanan'ny fampitahana amin'ny lahatsoratry ny Baiboly hita tao Komràno.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Septoajinta&oldid=1000353"
Dernière modification le 14 Janoary 2021, à 09:18
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 09:18 ity pejy ity.